Sein Lyan - စိ န် လျှံ: 2012
ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ( သို့ )အိမ်အပြန်လမ်း
ကျနော် မွေးရပ်ဇာတိ မြေကို မပြန်ဖြစ်တာ နှစ်နှစ် နီးပါး ရှိခဲ့ပြီ။ အခု အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အိမ်ခဏပြန်ဖို့ အခွင့် ကြုံခဲ့ရတယ်။ ကျနော့် အကျင့်အတိုင်း အိမ်ပြန်ရင် မပြောပဲ အိမ်က လူတွေ အံ့သြ၀မ်းသာအောင် ပြန်ချင်ပေမယ့် ကျနော့်အိမ် ဘယ်မှာလဲ ဆိုတာ ကျနော် မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်ရောက်ခြင်း ကျနော်ပြန်ရောက်နေတယ်လို့ ဖုန်းမဆက်ပဲ ဒီတိုင်း နေခဲ့တ
ယ်။ ဖုန်းဆက်ခဲ့ရင် မေတို့ဖေတို့က မျှော်နေကြမှာ။ စိတ်မော စိတ်ပူနေကြရမှာ ကို စိုးတာနဲ့ နေပြည်တော်ကနေ မော်လမြိုင် ကားလက်မှတ်ဝယ်ပြီးမှ အဖေရေ… သားကို မနက်ဖန် ကားဂိတ်မှာ လာကြိုပါလို့ ဖုန်းဆက်ရတယ်။ အဲဒီအခါမှ အိမ်က ကျနော်ပြန်လာမှန်းသိကြတယ်။
တကယ်ဆို ကျနော် တိတ်တိတ်ကလေး ခိုးပြန်ချင်တာ။ ဖြစ်ချင်တော့ အခု ပြောင်းထားတဲ့အိမ်က ကျနော် အရင်တခါရောက်တဲ့ အိမ်မဟုတ်သလို အဲ့ဒီအိမ်အသစ်က ဘယ်နေရာမှန်းကို မသိဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော် အဖေ့ကို ဖုန်းဆက်ပြီးလာကြိုခိုင်းရတယ်။
နေပြည်တော် မော်လမြိုင် ခရီးက ရှည်ကြာပါတယ်။ ခရီးထွက်ရတဲ့ထဲမှာ လမ်းမှာ အပေါ့အပါးသွားတာလောက် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတာမရှိဘူး။ ကားကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ မန္တလာမင်း ကားကြီးကို စီးပြီးပြန်လာရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကားက ထင်သလောက် မကောင်းပါဘူး။ ကျနော့်ဘေးနားတဲ့သူက ဒူးထောင်ပေါင်ကားပြီး အိပ်တဲ့အတွက် ကားသမားကို ပြောပြတော့ ဘေးကလူကစိတ်တွေဆိုးပြီး ခုံအလွှတ်ရှိတဲ့ နေရာ သွားအိပ်တော့မှ ကျနော် သက်သာရာ ရတော့တယ်။
ည၈နာရီခွဲကနေ နေပြည်တော်က ထွက်တဲ့ကားက မနက် ၄ခွဲ ကို မော်လမြိုင်ရောက်ပါတယ်။ လမ်းမှာ နှစ်နေရာ ရပ်နားပါတယ်။ တခါရပ်ရင်နာရီဝက်ကြာပါတယ်။ ကားဂိတ်ထဲ ကားဝင်လာတာနဲ့ အဖေနဲ့ ညီနဲ့ ခေါင်းလေးထောင်ပြီး လိုက်ရှာနေတာကို တွေ့လိုက်တယ်။ မနက် စောစော ကိုယ့်မိသားစု မျက်နှာကို မြင်လိုက်ရတာ ကျက်သရေ အရှိဆုံးပေါ့လေ။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော် တခါမှ မရောက်ဘူးတဲ့ အိမ်အသစ်ဆီကို ခေါ်လာပါတယ်။ လမ်းမှာလဲ အဖေနဲ့ ညီနဲ့ လုမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အင် . ဟင်အင့်နဲ့ ဖြေလာတာ မောရပါတယ်။ မေးခွန်းတွေက တရစပ်ပေါ့..။
ရောက်ပါပြီး။ ကျနော် တို့အိမ်အသစ်ကို ရောက်ပါပြီး။ ဒီအိမ်အသစ်ကို အဖေနဲ့ အမေစကာင်္ပူကနေပြန်လာပြီးတဲ့ အချိန်က စဆောက်တာပါ။ အိမ်ကိုတောင် စကာင်္ပူစတိုင် ဆောက်ထားပါတယ်လို့ အဖေက၀မ်းသာ အားရပြောပါတယ်။ ကျနော်လဲ အံ့အားသင့်စွာနဲ့ အိမ်ကို ကြည့်တော့ ဘယ်နေရာ စကာင်္ပူစတိုင် ဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ ပြောလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီဇိုင်နာလဲ အဖေ. ပန်းရံ ဆရာလဲ အဖေ. လက်သမားလဲ အဖေဆိုတော့ အိမ်တခုလုံးက စိတ်တိုင်းကျ အဖေ ရောသမ မွှေထားတဲ့ စကာင်္ပူ စတိုင် ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တောင် မနည်း ပြန်စဉ်းစားရတယ်။ စကာင်္ပူစတိုင် ဆိုတော့ အဖေဘယ်နားက အိမ်ကို မြင်သွားပြီး စကာင်္ပူစတိုင် ပြောတာပါလိမ့်လို့.. ။ မျက်စိထဲမှာတော့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အဖေ့စတိုင်အိမ်ပုံစံပဲ မြင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အိမ်ထဲလှမ်းဝင်လိုက်တော့ ဘုရားတရပါတယ်။ အိမ်အတွင်းကို လဲစကာင်္ပူစတိုင်တဲ့.။ သုတ်ထားတဲ့ ဆေးက အနီရဲရဲ.. ဒီအရောက်ကို အဖေက ရွေးတာပါတဲ့လေ။ အဲ့အနီရောင်ကို အမေက မကြိုက်လို့ အ၀ါရဲရဲ ထပ်သုတ် လိုက်ပါတယ်။ ကဲ..။ အနီပေါ် အ၀ါ ဖုန်းနေတဲ့ ရဲ ရဲ တောက် အရောင်ကြီးကို မျက်စိထဲပဲ မြင်ကြည့်ပါ။ ဒါတင် မပြီးသေးဘူး။ ညီနဲ့ ညီမက သူတို့ ကိုယ်ပိုင်အရောင်တွေကို သူ့တို့ပိုင်တဲ့ အခန်းအတွင်း အပြင်ထပ်သုတ်လိုက်တော့ အိမ်က လေးယောက်လေးရောင်နဲ့ စကာင်္ပူ စတိုင်နဲ့ မတူပဲ အိန္ဒိယ အိမ်နဲ့တူနေလို့ ဆေး အရောင်ရွေးခဲ့ပေးရတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အမေက ထွက်ပြီး ကြိုနေပါတယ်။ နည်းနည်းပိန်သွားတာက လွဲလို့ ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ ပြန်တွေရတော့ အရမ်းကို ပီတိဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်တာနဲ့ သူ့အခန်းထဲက သူ့ကတင်ပေါ်ကို ခေါ်ပြီး အတင်းအိပ်ခိုင်းပါတယ်။ ခရီးပန်းလို့ ခဏအိပ်လိုက်ဆိုပါတယ်။ အမေစိတ်ချမ်းသာအောင် အမေ့ကုတင်ပေါ်သွားတော့ အိမ်က ညီမရော ညီရော. အဖေရော အမေ့ ကုတင်ပေါ်တက်လာပြီး သိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကို မေးတော့တာပဲ။ ကျနော့် အိမ်အတွက် ဘာပစ္စည်းမှ မ၀ယ်သွားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် အိတ်ကို မွှေပြီး ညီနဲ့ ညီမက အိုင်ပက်ကို အမွေခွဲပါတယ်။ အဖေကလဲ နင်တို့တွေ ဒါမျိုးကိုင်တတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အဖေစကာင်္ပူသွားတုန်းက ဒါတွေ နှိပ်တတ်အောင် သင်ခဲ့တာပါဆိုပြီး အတင်းလုပါတယ်။ အဖေစကာင်္ပူ သွားခဲ့တာဟာ အဖေ့အတွက် တပန်းသာပါတယ်။ နည်းနည်းဖြင့် စကာင်္ပူ မှာတုန်းက နဲ့ ကိုင်ပေါက်လို့ ညီ့ခမျာ လူးလူးလှိမ့်လှိမ့် ခံရပါတယ်။
အဲလို လုနေတုန်း အမေ ပျောက်သွားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ အမေအိမ်သာများတက်နေလား ဆိုပြီး သတိရလို့ မေးတော့ အမေက မှန်တင်ခုံမှာ အလှပြင်နေပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း လိုင်ဒါတွေ ဆိုး နှုတ်ခမ်းနီတွေ ဆိုးပြီး သိပ်လှနေပါတယ်။ ဆေးရုံ ၂ လ တက်ပြီး ၁ လ အကြာမှာ အမေအလှပြင်တာ ဒီနေ့ ပထမဆုံး ဆိုတော့ အဖေက သိပ်ပျော်နေပါတယ်။ ငါ့မိန်းမ ဒီနေ့ အရမ်းကို လန်းနေတော့တာပဲ ဆိုပြီး အမေ့ဝတ်ဖို့ အကျီတွေ သွားရွေးပေးပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မိသားစုတွေ အမေ့စိတ်တိုင်းကျ အပြင်ထွက်ပြီး မနက်စာ စားပြီးတော့ အမအိမ်ခဏသွားခဲ့ကြပါတယ်။
အိမ်က ဆောက်လက်စ တန်းလန်းကြီးဆိုတော့ နေ့ဘက် အလုပ်သမားတွေနဲ့ ရှုတ်နေပါတယ်။ အဖေကိုယ်တိုင် ညီနဲ့ မျက်နှာကျက်ရိုက်ပါတယ်။ ခြံစည်းရိုးကို တော့ အလုပ်သမားတွေငှားပြီးခတ်ပါတယ်။ တအိမ်လုံး သူ့နေရာ သူမကျသေးဘူးဆိုတော့ ကျနော် နေရခက်ပါတယ်။ ဟိုအခန်းဝင် အနီ ဒီအခန်းထွက် အ၀ါနဲ့ မျက်စိလဲ နောက်ရပါတယ်။ အမတွေ ညီမတွေကတော့ ကျနော်ပြန်လာတော့ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေ ရွေးချက်ပေးပါတယ်။
ညဘက်ရောက်တော့ အဖေက ညီနဲ့ကျနော့်ကို သူ့နဲ့ ဘီယာသောက်ဖို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘီယာဆိုင်သွားပြီး ဘီယာနဲ့ အကင်နဲ့စားကြ သောက်ကြ စကားပြောကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ စကားစပ်ပြီး အရင် နေခဲ့တဲ့ အိမ်အကြောင်းမေးမိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြသနာစတာပဲ။ အဖေက အဲဒီအိမ်ကို ရောင်းမယ်။ သိန်းဘယ်လောက်ရရင်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုတော့ ညီက ကိုကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကို ၀ယ်လိုက်ပါလား ဆိုပြီး ကြားကနေပွဲစားလုပ်ပါတယ်။ အိမ်ကဘယ်လို ကောင်းကြောင်း. နောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီစက်မှုံဇုန်က ဘယ်လို စည်ကားသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း. ဒီမှာမနေရတာက အမေဆေးခန်းသွားနေရလို့ ဆိုတဲ့အကြောင်း. ဒီအိမ် အဖေနဲ့ အလုပ်ဖြစ်ရင် သူ့ကို ဆယ်သိန်း ပေးပါဆိုပြီး တခါတည်း ဈေးဖြတ်ပါတယ်။
ရောင်းရမယ့်သူ ရှားလို့ ညီက အကို့ကို ပြန်ရောင်းတယ်။ အဖေကလဲ သားဝယ်မယ်ဆိုရင် ဈေးချပေးမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း. သူများဝယ်တဲ့ဈေးထက် ပိုချပေးမှာ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ၀ယ်ပြီးသွားရင် ရောင်းဈေးထက် လျှော့ပြီး မိန်းမကို ပြန်အပ် ပိုက်ဆံနည်းနည်းကို သူယူထားမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြန်တယ်။ အင်း.. အဖေနဲ့ ညီနဲ့က ကတုံးပေါ် ထိပ်ကွက် အကွက်တွေ နင်းပြီး သားဖြစ်သူကို အချဉ်ထည့်နေတာနဲ့ တူပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာအောင် စဉ်းစားမယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ ညီ ရမယ့် ပွဲခထဲက အဖေက နှစ်သိန်း ပြန် ခေါင်းပုံ ဖြတ်နေသေးတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါတွေက ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အဖေတို့အတွက် ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်ပေါ့လေ.။ ဘာပြောပြော အဖေနဲ့ ညီနဲ့ ကျနော့်ကို အိမ်လုရောင်းပြီး ပွဲစားခ တောင်းတာကို သဘောကျပါတယ်။
နောက်နေ့ ရောက်တော့ သတင်းကဘယ်လို ပေါက်ကြားသလဲ မသိဘူး။ အမေ့နားထဲ ပြန်ရောက်ပါတယ်။ အမေကလဲ ဒီအိမ်ကို သားဝယ်ရင် ပွဲခရတာ အမေပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအိမ်မှာ သားကြိုက်တဲ့ အိမ်သာခွက်ကို အမေပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီးဝယ်ထားရလို့ပါတဲ့။ ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိတဲ့ အရောင်းအ၀ယ်နဲ့ သားအမိတွေ ဝေစုခွဲနေတာ။
ညီမကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဒီလို မဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းနဲ့ သူပိုက်ဆံ မယူချင်ပါဘူးတဲ့။ ကျနော့်ကို သူအခန်းထဲ ခေါ်ထည့်ပြီး ပုံးထဲက စာရွက်တွေ စာအုပ်တွေကို သွန်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒီထဲက ကိုကြီးကြိုက်တဲ့ သီချင်းနဲ့ စာမူတွေ ယူသွားပါတဲ့။ ပြီးတော့ ကိုကြီးနာမည်နဲ့ ရေးချင် ရောင်းချင်လဲ ရတယ်တဲ့။ အခု သူအနှစ်နှစ် အလလက စုထား ရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေပါတဲ့..။ ကြိုက်တာယူ။ ညီမအနေနဲ့ အလုပ်မဖြစ်မယ့်တူတူ အကိုကြီးကို ပုတ်ပြတ် ရောင်းချင်လို့ပါတဲ့။ ညီမ စာတွေ သီချင်းတွေနဲ့ ကိုကြီးဘ၀ တခုလုံး သာယာလှပသွားမှာပါ ဆိုပြီး နှစ်ဆွေး ကဗျာတွေ စာတွေ သီချင်းတွေကို ရောင်းပါတော့တယ်။ အဲဒါကို ဈေးဖြတ်လိုက်တာ ငါးသိန်းတဲ့.။အဆစ်အနေနဲ့ လက်တန်းသီချင်းနှစ်ပုစ်ကို တောင် လက်ဆောင်ရေးပေးဦးမှာ ဆိုပြီး ငါးသိန်းနဲ့ ဈေးဖြတ်ပါတယ်။ ကျနော်လဲ ညီမစိတ်ချမ်းသာအောင်ဝယ်လိုက်ပါတယ်။
အဲလို ၀ယ်လိုက်တာကို ညီက သိတော့ သူ့အရင်ကရီးစားဓာတ်ပုံတွေ ရီးစားစာတွေ ကျောင်းစာအုပ်အဟောင်းတွေကို ရှာထုတ်လာပြီး ကျနော့်ကို တသိန်းခွဲနဲ့ ဈေးလာဖြတ်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ စိတ်ချမ်းသာအောင် ၀ယ်ရပြန်တယ်။ ဒါတင်မပြီးသေးဘူး။ အမေရော.အဖေရော သူတို့ မှာ ရှိတဲ့ စာတွေ လာရောင်းပြန်တယ်။ တနေကုန် အရောင်းအ၀ယ် ကိစ္စနဲ့ တအိမ်လုံး ဆူညံနေတယ်။ သူကပိုရသင့်တယ်။ ငါကပိုရသင့်တယ်နဲ့ပေါ့။
ဒါနဲ့ သူတို့ကိုဈေးဖြတ်ပြီးတော့ ပိုက်ဆံလာတောင်းပါတယ်။ ဒါနဲ့ကျနော်က စကာင်္ပူပြန်ရောက်ရင် လွှဲပေးလိုက်မယ် အခုတော့မပါဘူးဆိုတော့ သူတို့က “ကိုကြီး ပြန်လိုက်တော့ သွားလိုက်တော့ “ လို့ စိတ်တွေ ဆိုးပြီး သူတို့လေလံပစ္စည်းတွေ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ပြန်သိမ်းပြီး ပါးစပ်က ပွစိပွစိပြောပါတော့တယ်။
ကျနော်ကတော့ သူတို့ကို ကြည့်ပြီး သဘောတွေကျနေပါတော့တယ်။ ဒီတခေါက်ပြန်တော့ အဖေက ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ဆိုတဲ့ အဓိပါယ်လေးကို ပြန်ပြောပြတယ်။ အဖေပြောတဲ့ မိသားစု ဆိုတာ ရှိအတူ မရှိအတူ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ အခုချိန်ထိ အဖေပြောသလို မိစုံ ဖစုံနဲ့ မောင်နှမတွေ စုစုရုံးရုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေရတာကို က အဖေတို့အမေတို့အတွက် မင်္ဂလာ တပါး ဆိုသလိုပဲ ကျနော်တို့အတွက်လဲ မိဘတွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါပဲလေ။
မော်လမြိုင်ကို တညအိပ်နှစ်ရက်ခရီးနဲ့ မိသားစုတွေကို ပြန်တွေ့ရတာ ကျနော့်အတွက်တော့ အတိုင်းမသိတဲ့ကြည်နူးဝမ်းသာ ကျေနပ်မှု တခုပါပဲ။
Writer Sein Lyan Time 11:10 am4comments: Links to this post
သား …. အမေတို့ အဖေတို့ရာ.. သားစိတ်မကောင်းပါဘူး. ခုချိန်ထိ သားဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူး..သားကိုသားလဲ တော်တော့ကို စိတ်ပျက်တယ်.
မိဘ… ဘာစိတ်ပျက်စရာရှိလို့လဲ သားရယ်..
သား…. ဟုတ်တယ်လေ.။ အားလုံးပေါ့..။ ဟိုမေမေ့သူငယ်ချင်း သား ဆရာဝန်လိုင်းရတာ.။ ဖေဖေ သူငယ်ချင်းသမီး အမှတ်များများနဲ့ အောင်တာ တွေ..။သားကျတော့ အမေတို့ အဖေတို့ ထင်သလို မဖြစ်လာဘူးလေ.။ အဲဒါကြောင့် သားကိုယ်သား စိတ်ပျက်တယ်လို့ ပြောတာပါ။
မိဘ.. မဟုတ်သေးဘူးသားရဲ့..။ ဒါဒီလို ထင်ရင် သားပင်ပန်းမှာပေါ့။ လူဆိုတာ. အထူးသဖြင့် မိဘဆိုတာ သားသမီးကို ဖြစ်စေချင်တာ တတ်စေချင်တာ သိစေချင်တာ..။ ဒါက မိဘတိုင်း က သားသမီးကို မျှော်လင့်တာ..။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်လာမယ် မဖြစ်လာဘူးဆိုတာက ကံတရားပေါ် မူတည်တယ်လေ။ မိဘအနေနဲ့ ကိုယ့်သားသမီးအပေါ်တော့ မျှော်လင့်ချက်တခု တော့ထားရမှာပဲ..။
သား.. မဟုတ်သေးဘူး မေမေ..။ သားခံစားရတယ်။ သားခံရခက်တယ်။
အချိန်တိုင်းမှာ မေမေတို့ ဖေဖေတို့က မျှော်လင့်ချက်ကြီးတခုထားပြီး မျှော်လင့်နေတော့ ဒါတွေက ဖြစ်မလာတဲ့အခါ သားတယောက်အနေနဲ့ ခံစားရတာပါပဲ။ နာကျင်ရတာပါပဲ။ ဘာတွေပဲ မေမေတို့က မျှော်လင့်ချက်ထားထား မထားထား. သားအနေနဲ့က သားလုပ်နိုင်တာထက်ပိုပြီး ဘမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ တခါတလေသာ မေမေတို့ကို သားက ဘယ်သူပါ ဘာပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်သားတယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းစစ်စစ်ကိုပဲ သိမြင်စေချင်ပါတယ်။ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မထားရင်ပေါ့….
ဒီလိုမိဘနဲ့သားသမီး အပြန်အလှန်စကားတွေက ငယ်ငယ်က ကြည့်ဖူးတဲ့ရုပ်ရှင်ကား တကားကို မှတ်မိနေတာပါ။ အဲတုန်းက ကိုယ်လဲ မင်းသားနေရာက၀င်ပြီး ငါလဲ သူလို့ပဲ ဘယ်တုန်းကမှ ကောင်းတာတွေ မဖြစ်ခဲ့ဘူး.။ ငါ့မိဘတွေမျှော်လင့်ထားသလိုပဲ ဖြစ်မလာဘူး။ ငါ့ကိုယ်ငါလဲ တော်တော်စိတ်ပျက်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အတူ ရုပ်ရှင်မှာ နစ်မျော ခံစားခဲ့ဖူးတယ်။
တခါတလေကျတော့ စဉ်းစားမိတယ်။ ဒီလောကကြီးမှာ ဘယ်နှယောက်လောက်များ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘ၀င်မကျ. စိတ်တိုင်းမကျတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု မျိုး ခံစားနေရသလဲ။ ဒီစိတ်ဖိစီး ဘ၀င်မကျမှုက တခြားတယောက်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တခုကြောင့်လား အဲဒီမျှော်လင့်ချက်တွေခြား နစ်မွန်းပြီး ကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်တွေ မဖြစ်လာသလားဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒါတွေကလဲ လူတွေမှာ ငါမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကို စွဲစွဲ မြဲမြဲ ကိုင်စွဲပြီး မသိစိတ်တွေက တနေတခြားနဲ့ ကြီးထွားရင့်ကျက်လာရင်းနဲ့ လောကကြီးကို
ကြောက်ရွံနေတတ်လာတာပဲ ဖြစ်မယ် ။
တကယ်တော့ လူဆိုတာ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ဖန်တီးနေကြတယ်ဆိုပေမယ့် တခြားသူတယောက်ရဲ့  အသိအမှတ်ပြု ခံရခြင်းကို ရှာဖွေမိနေကြတယ်။ အများစုက ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေရဲ့  အလေးပေးမှု အသိအမှတ်ပြုမှုကို မသိစိတ်က လိုလိုလားလား တောင့်တ တတ်ကြတယ်။ လူတွေကြောက်ရွံ့မိတာက ငါတို့က သူတို့ စိတ်နဲ့ မတိုက်ဆိုင်ရင် သူတို့ထင်သလို ဖြစ်မလာရင် သူတို့ငါကို မချစ်တော့ဘူး. မခင်တော့ဘူး. စွန့်ခွာသွားမှာ ။ အဲဒီအခါ ငါသူတို့ဆီက ငါလိုချင်တဲ့ ပျော်ရွင်မှုတွေ.ကြင်နာမှုတွေ မရတော့ဘူး ဆိုပြီး
ဒါကြောင့် လူအများစုက့ မျှော်လင့်ချက်တခု ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ကြိုးစားရင်း ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် မျှော်လင့်ချက်ကြီးထားရင်း ဖြစ်မလာတော့တဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်အကြီးအကျယ် ကျဆင်း ကိုယ့်တိုင်က မပြည့်စုံတဲ့ဘ၀ကျိန်စာ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ကြတာပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ ယူဆတဲ့အခါ.. ကိုယ်တိုင်က ဘ၀မှာ ဘာမှမပြည့်စုံဘူးလို့ ယူဆတဲ့အခါ..ဘာတွေ တွေးပြီး ဘာလုပ်မိသလဲ။ စိတ်ဓာတ်တွေ အကြီးအကျယ် ကျမိသလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံမိမလား။ တကယ်တော့ ဒါကလူ့အဖွဲ့အစည်းပဲ။ ဒီလို ဖြစ်လာအောင် လူ့အဖွဲ့အစည်းက တွန်းအားတွေပေးနေတာပါ။ ဒါကို ကိုယ်တိုင်က နေတတ်အောင် မကြိုးစာရင်း ကိုယ့်အတွက် ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နေစရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး.လို့ပဲ ဖြည့်တွေးရမယ်။
တကယ်တမ်းပြန်တွေးရမှာက ကိုယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ ယူဆတာဟာ ကိုယ်က တခြားတယောက် မျှော်လင့်ထားတဲ့ထိ ဖြစ်မလာသေးလို့။ ဘ၀မှာ မပြည့်စုံဘူးလို့ တွေးထင်လိုက်တိုင်းမှာ ကိုယ်ထက်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေ ကို မသိစိတ်က ပြိုင်ဆိုင်မျှော်လင့်မိနေလို့ ဆိုတာ သတိထားမိရမယ်။ အဓိက က တော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့လူက ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လို မျှော်လင့်ချက်ထားလဲ. ကိုယ်က သူတို့မျှော်လင့်ချက်ထားတာကို ဘာလို့ စိုးရိမ်တကြီး လိုက်ဖြည့်ချင်နေတာလဲ ထက် ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဘာလဲ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် သိထားနိုင်ဖို့ ပါပဲ။
ဒီအချိန်ဟာ ကိုယ်ဘယ်သူဆိုတာ သူများလက်ခံဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် သူများ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနေဦးမှာပဲ။
ဒီအချိန်ဟာ ကိုယ်ဘယ်သူဆိုတာ ကိုယ်လက်ခံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေရင် ကိုယ့် မျှော်လင့်ချက်တွေ နဲ့ ကိုယ်ဆက်ရှင်သန်နေဦးမှာပဲ။
ဒီအချိန်မှာ သူများမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်တွေကို အလွန်အကျွံ စားသုံးထားပြီးပြီး ဆိုရင်တော့… ကိုယ်ဟာ ဘ၀ရဲ့ မပြည်စုံမှု ကျိန်စာ ကို ကောင်းကောင်းကြီးမိနေလောက်ပြီး။
အမေ.. ဒါက သားကိုယ်သား ပြန်နှိပ်စက်တာပဲ။ လူတိုင်းက အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်တယ်လေ သားရဲ့ ။ သားကိုယ်တိုင်တောင် မိဘကို အကောင်းဆုံးပေးဆပ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ မဖြစ်လာတဲ့အခါ သားက စိတ်ပျက်ပြီး သားဘယ်သူဆိုတာ လက်ခံပေးဖို့ ပြောနေသေးတာပဲ။ ဒီလိုတော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပျက်မှုနောက်လိုက်ပြီး ဘ၀မှာ မပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ အတွေးလေး မ၀င်သွားဖို့ပဲ သားရယ်။
Writer Sein Lyan Time 7:09 am3comments: Links to this post
Writer Sein Lyan Time 7:03 pm4comments: Links to this post
Writer Sein Lyan Time 7:46 am6comments: Links to this post
ခုတလော….. ခုတလောလို့ ဆိုတာထက် ဒီနှစ်ထဲမှာ ကိုယ့် အသိ ဘလော့ဂါတွေ သူငယ်ချင်းတွေ မင်္ဂလာယူကြတယ်။ တော်တော်များတယ်။ အလုပ်ကောင်းလို့ပဲလား။ ၀င်ငွေတွေ သိပ်ကောင်းနေလို့ပဲလား။ ဒါမှ မဟုတ် နှစ်ယောက်တအိမ်မက်. နင်လုပ်တာ ငါစား ငါလုပ်တာ နင်စု ဆိုတာမျိုးလာတော့မသိ။ ကဲပြီးရင် မင်္ဂလာဝတ်စုံတွေ ငှား တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ စကာင်္ပူတခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် သွား ရိုက်လိုက်တဲ့ မင်္ဂလာပုံတွေ။ ဒီထက် အားမရလို့ သိုးခြံ မြင်းခြံမကျန် အပင်ပန်းခံ သွားရောက်ရိုက်နေကြတဲ့သူတွေလဲ ပါသေး။ (ကို မောင်သန့်  မပါ) (ဟမ်.. သူ့အရှေ့တုန်းကတော့ လှဒယ် ပြောခဲ့တာ) ဒါတောင် အားမရသေးဘူး ကိုယ့်အလှည့်ကျ စနစ်ကျရအောင် သူတို့က ကိုယ်တိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ပြမယ် ဆိုတဲ့သူတွေက ရှိသေးတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်မှာ ယူနိုင်တဲ့သူတွေကို အားကျတယ်။(ဒါကလဲ သူတို့ ကြားကောင်းအောင် ပြောတာ) ကိုယ်တွေလဲ အဲလို အလှမင်္ဂလာ ဓာတ်ပုံ လိုက်ရိုက်ခံမယ့် သတို့သမီးကို ငှားလို့ ရငှားချင်သေး။ တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ ဘလော့ဂါ လူပျိုကြီးတွေကို ဖေဘွတ်ပေါ် ခေါ်ပြီး သက်သက် အနိုင်နဲ့ပိုင်း စော်တကော် မော်တကားလုပ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ။ ရှုတ်ချသင့်တယ်။ ဒီလိုရှုတ်ချဖို့ ကိုပေါ အကူအညီတွေ ယူရလိမ့်မယ်။
ဒါတင်မကသေးဘူး။ပြီးတော့ မွေးကြတယ်။ မွေးပြီးတော့လဲ မွေးတဲ့ရက်က စလို့ မဲ့၊ ပြုံး၊ ရယ်၊ ငို က အစ သေးပေါက် အီးပါ အဆုံး အိုင်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်လိုက်၊ အိုင်ပက်နဲ့ ရိုက်လိုက် ယူကျုပေါ်တင်လိုက်နဲ့ လူပြိုတွေ ကလေးမရှိတဲ့သူတွေ မနာလို နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်အောင် စက္ကန့် မိနစ် မခြားတင်တဲ့ ပုံတွေ။ ( ဥဥကလူသစ်. အမစင်. အမသံ. ကိုသီဟသစ် မပါ) တချို့တချို့တွေ သမီးလေး အတွက် ဖေဘွတ်တွေဖွင့်လို့ သူငယ်ချင်း အဖြစ်တောင် စတင်လက်ခံဖို့ အချိန်နဲ့ အမျှ စောင့်ခဲ့ရသေး။ (အမစင် မပါ)
ကဲ … ထားပါတော့။ ဒါမျိုးတွေ တွေ့တော့လဲ ဖိုးစိန်က အတိတ်ဟောင်းကို ပြန်တူးဆွ သတိရရတယ်။ ခုလို ခေတ်ကောင်းတဲ့ဘ၀လို မင်္ဂဆောင်ဝတ်စုံတွေ ထည်လဲဝတ် ဓာတ်ပုံ အရိုက်မခံရပေမယ့် သူများ ညီမ ကိုယ်ချစ်သူ ကို ဘုရားဖူး တညအိပ်ဆိုပြီး အလည်ခေါ်သွားလိုက်တာ သုံးညနဲ့ ခိုးပြေးသလို ဖြစ်လို့ သူ့ အကိုတွေ ဖုန်း ဖန်း ဖျန်း တဆိုပြီး တဖျတ်ဖျတ် ရိုက်တာကိုတော့ အားရပါးရခံခဲ့ရတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်.. အရိုက်ခံရတာနဲ့ တန်တဲ့ အပြင် မတူမတန်ဘူးဆိုပြီး သူ့ကို အိမ်ပြန်ခေါ်သွားတော့ ပိုလို့တောင် တန်သေး။
ကဲ.. ထားပါတော့။ သုံးလေးလ လောက်နေတော့ သူ့ ဗိုက် ကလေး ပူလာတယ်။ သူ ဗိုက်ပူလာလို့ ဖိုးစိန် ကို မိဘတွေက အိမ်ပေါ်က နှင်ချလိုက်တယ်။ သွားလေရော့ ရန်ကုန်ဆိုပြီး။ ရန်ကုန်ရောက်ပေမယ့် ဖိုးစိန်လဲ အဲ့ဗိုက်ပူလေးကို တလ တခါ တော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် သွားခိုးကြည့်တာပဲ။ အဲ့ဗိုက်ပူလေး ပြန်ပိန်သွားတော့ ကောင်မလေး သေးသေးလေး တယောက် ထွက်လာတယ်။ အဲအချိန်က စလို့ တသွေး တသံ တမိန့် နဲ့ ဖိုးစိန် မော်လမြိုင် ကို ခြေဦးမလှည့်ရ။ ဒုတ်ယူမလား ဓားယူမလား။ ကိုယ်တွေက ဒါမျိုးတွေ ကြိုက်တတ်တာ မဟုတ်တော့ အေးအေးဆေးဆေး ရန်ကုန်မှာ တရွာပြောင်း သူကောင်းလုပ်ပလိုက်တယ်။ အေးရော။
ကိုယ်လဲ အသဲနှလုံးနဲ့ပဲ။ ကောင်မလေး သေးသေးလေးကို ချစ်တတ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဖိုးစိန် စိတ်အလို အရ ဇာတ်နာနာနဲ့ အလွမ်းဇာတ်ခင်းလိုက်တယ်။ လုံးဝကို မတွေ့ဘူးပေါ့။
ခုဆိုရင် ဖေကြီးစိန် ကို သမီးလေးက စာချွန်တွေပါးနေပြီး။
ကဲ.. ထားပါတော့။ ကိုယ့် အပေါင်းအသင်းဘလော့ဂါတွေက သမီးတွေ သားတွေ ရှိတော့ ကိုယ်လဲ မနာလိုစိတ်တွေ တဖွားဖွား ကိုယ့် သမီးလေးကို ဘယ်တုန်းကမှ သတိမရဖူးတဲ့ စိတ်တွေ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိဘူးတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ သမီးလေးကို လွမ်းလိုက်ရတာ.. ခုတလော မစားနိုင် မသောက်နိုင် မသွားနိုင်။ ဘာတွေ့တွေ့ တမှိုင်မှိုင်..။ အပျော်အပါးဆိုတာ မရှိ။ အချစ်ဆိုတာ မရှိ။ အပေါင်းအသင်းဆိုတာ မရှိ။ ဘာလုပ်လုပ် စိတ်ကို ကမရှိ။
ဒါတွေကို ထွက်ပေါက်ရအောင် ကိုယ့်မှာ သမီးလေး ရှိကြောင်း ဖွင့်ပြောမိတော့ ကိုယ့်ကို ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေက ငါးခူးပြုံး ငါးသလောက်ပြုံး ပြုံးသလို လှောင်ပြုံး သရော်ပြုံး….။ ကိုယ်ကြားဖူးတာက လူကြားထဲမှာ လူပျို ကို အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေကို လူပျို လုပ်တဲ့သူက ရှင်းပြရတာ အခက်ဆုံး။ ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ သမီးလေး ရှိပါတယ် လို့ ခံစားပြောပြတာကို ကိုယ့်ကို အားလုံးက လူပျိုလို့ မျက်စိမှိတ် ဇွတ်ငြင်းနေလို့ ရှင်းပြရတာ အခက်ဆုံး။ ကိုယ်ပြောနေတဲ့စကားတွေက ဖြစ်ရပ်မှန် ကို လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတပုဒ်လို…။ လူတွေ သိပ်ခက်တယ်။ အထူးသဖြင့် အားပေါက်အောင်ရှင်းပြလဲ ဒီဘူတာ ပြန်ပြန်ဆိုက်တဲ့ AaB က စာမရေး လေပေး ဘလော့ဂါတွေ. :P
ကဲ... ထားပါတော့... လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ... ဖိုးစိန်မှာ သမီးလေး တယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကို...
Writer Sein Lyan Time 7:28 pm 8 comments: Links to this post
Writer Sein Lyan Time 10:53 pm5comments: Links to this post
ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ ( သို့ )အိမ်အပြန်လ...